Alasora : Trano enina indray kilan’ny afo – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2018 → septembre → 19 → Alasora : Trano enina indray kilan’ny afo
Isan’ny nandrava fananana maromaro tao anatin’ny indray mipi-maso tokoa tato ho ato izay ny hain-trano, tetsy sy teroa. Ny farany teo, tao Alasora dia trano enina indray no indray lasa lavenona ny alatsinainy lasa teo
Zavatra kely sy bitika tsy voatandrina foana tokoa matetika no miteraka olana goavana ary hitondràna takaitra. Toy ny hain-trano goavana niseho teny Ambohimarina, Alasora ny alatsinainy atoandro lasa teo. Araka ny fampitam-baovao azo avy eo anivon’ny zandamariam-pirenena dia nisy olona nandoro fako tsy lavitra ny toerana nitrangan’ity fahavoazana ity. Tsy voatandrina anefa izany fandoroana fako izany, moa ny rivotra sy ny hain’andro nanampy trotraka ny firoborobon’ny afo ka nihitatra haingana teny amin’ny trano iray tsy lavitra teo. Tao anatin’ny fotoana vetivety monja dia niampita tamina trano iray hafa izany. Niezaka namono ny afo ihany ireo fokonolona saingy tsy voafehy izany ka io nihitatra tamina trano maromaro hafa teo akaiky io. Fotoana maromaro taty aoriana vao tonga teny an-toerana ireo mpamonjy voina niezaka namono tanteraka ny afo, niaraka tamin’ireo mpitandro filaminana nidina teny an-toerana sy niezaka nandamina ireo mponina.
Mitontaly eo amin’ny 70 tapitrisa ariary any ho any fahavoazana tamin’ity hain-trano ity araka ny fanazavàna azo. Mahatratra 28 kosa ireo olona tsy manan-kialofana intsony eo anatrehan’izany. Ireto farany moa dia napetraka vonjimaika ao amin’ny Epp Alasora, mandra-piandry izay fanapaha-kevitra raisina mahakasika azy ireo.